Dutchtown Downtown ရှိ Spring Sidewalk Sale • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Downtown Dutchtown ရှိ Spring Sidewalk Sale
အပေါ် Posted မတ်လ 10th, 2021
သောကြာနေ့၊ မတ်လ ၂၆ ရက်နှင့်စနေနေ့၊ မတ်လ ၂၇ ရက်တွင် Downtown Dutchtown တွင်စျေး ၀ ယ်ပါ။ အိမ်နီးချင်းကုန်သည်များ၊ pop-up ရောင်းချသူများ၊ အကျိုးအမြတ်မယူသောအရာများနှင့်အခြားအရာများသည် Meramec Street တွင်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များ၊ အထူးအရောင်းအ ၀ ယ်များ၊
သင်၏အကြိုက်ဆုံးဆိုင်များသို့သွားပြီးစီးပွားရေးအသစ်များကိုလေ့လာရန် Downtown Dutchtown သို့လာရောက်ပါ။ အသစ်၊ အသုံးပြုပြီးနှင့်စပျစ်သီးပြွတ်အဝတ်အစား၊ အိမ်အလှဆင်၊ အလှအပထုတ်ကုန်များ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ ကစားစရာများနှင့်အခြားအရာများရှာဖွေပါ။ ထို့အပြင်ကလေးများအတွက်မျက်နှာပန်းချီနှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။ Dutchtown ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောမိသားစုနှင့်အတူတစ်ရက်နေပါ။
$ 50 နှင့်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာတစ်လုံး
Space Cadets မျက်နှာပန်းချီကား
အောက်မှာ Filed ဒိန်းမတ်. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား, ဒိန်းမတ်နှင့် Dutchtown ဖြစ်ရပ်များ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် မတ်လ 22nd, 2021 .
ဒိန်းမတ် ဒိန်းမတ် Downtown Dutchtown ရှိ Spring Sidewalk Sale